Uyifaka njani kwaye uyisuse njani imida kwiPowerPoint
Ungayithatha njani i-cialis
Xa uqala ukwenza iibhokisi zombhalo kwi-PowerPoint 2013, azinayo imida, ke ziyadibana kunye nemvelaphi yesilayidi. Unokongeza umda kuyo nayiphi na into, ukhetha isitayile somgca (oqinileyo, odibeneyo, njalo njalo), umbala womgca, kunye nobunzima bomgca (ubukhulu). Ungawususa umda kwibhokisi yokubhaliweyo nangaliphi na ixesha.
Kulo msebenzi, ususa imida kwiibhokisi zombhalo ezimbini kwaye usebenzise imida eyahlukeneyo kwabanye ababini.
Kwisilayidi 4, khetha ibhokisi yemiyalezo yokuLungiselela ngokukhawuleza.
Kwifomathi yokuFomatha izixhobo, cofa iqhosha leShape Outline emva koko ucofe uLuhlu.
Phinda amanyathelo 1 kunye no-2 kwibhokisi yokubhaliweyo evulekileyo yasekuseni.
Cofa kwibhokisi yokubhaliweyo ekhethekileyo yeBlue Plate.
Kwifomathi yokuFomatha izixhobo, cofa iqhosha leShape Outline uze ukhethe isikwere esimhlophe phezulu kwiphalethi (emhlophe, ngasemva 1).
Jonga lo mzobo.
Cofa kwiShape Outline button, ukhethe Ubunzima, kwaye ukhethe umgca wamanqaku ayi-6.
Khetha ibhokisi yesicatshulwa ekhethekileyo.
Kwifomathi yokuFomatha izixhobo, cofa iqhosha le-Shape Outline kwaye ucofe i-Eyedropper.
Isixhobo se-Eyedropper sikwenza ukuba ukhethe umbala kwenye into kwisilayidi.
Cofa imvelaphi yebhokisi yombhalo weLunch ekhawulezayo, uthabathe loo mbala.
Umda onalo mbala usetyenziswa kwibhokisi yokubhaliweyo ekhethekileyo yeDessert.
Cofa kwiShape Outline button, ucofe Ubunzima, kwaye ucofe u-4 1/2 wenqaku.
Cofa i Shape Outline button, cofa u-Dashes, kwaye ucofe iRound Dot echaziweyo.
ipilisi ene-gpi a325
Ukuziqhelanisa ngakumbi, zama eminye imibala yemida, ubunzima, kunye nezitayile zebhokisi yokubhaliweyo. Umzekelo, cofa iqhosha le-Shape Outline kwaye ukhethe Ubunzima → Imigca engaphezulu, cofa umbala weMigca ithebhu, kwaye uzame ukudala umgca wegradient.
Ithiyori yomda ophakathi wedummies
Inqaku lesixhenxe lomgaqo-siseko
Unyango lwe-otc lwe-thrush
ingakanani i-excedrin migraine endinokuyithatha
I-gel ye-acne yamabala
Itheyibhile ye-diclofenac 75mg dr